“Tani waa sababta ay Manchester United u tahay meesha ugu fiican ee uu Ronaldo aadi karo” – Luís Figo – Gool FM
Dajiye September 24, 2021
(Manchester ) 24 Sebt 2021. Halyeeyga reer Portugal ee Luis Figo ayaa xaqiijiyay in xiddiga ay dhalashada wadaagaan ee Cristiano Ronaldo uu doortay dooqa ugu fiican isaga markii uu ku soo laabtay kooxdiisa Manchester United.
Ronaldo ayaa soo afjaray xiriirkii uu la lahaa Juventus bishii hore kahor inta uusan u dhaqaaqin Manchester United, kaddib markii magaciisa lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo Manchester City.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Luis Figo, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Shaqsi ahaan, waxaan u maleynayaa in Manchester United ay tahay xulashada ugu fiican Cristiano Ronaldo, sababtoo ah waa meesha uu yaqaan.”
“Wuxuu taariikh ka sameeyay kooxda, taageerayaashu way jecel yihiin isaga, waxaana u malaynayaa inay tahay meesha ugu fiican, si ay ugu noqoto qeybta ugu dambeysay ee xirfadiisa shaqo.”
“Haddii aad aado koox la tartameysa, waxaan u maleynayaa inay jiri doonaan dhibaatooyin badan oo la xiriira taageerayaasha, marka waxaan u maleynayaa inay taasi tahay doorashada ugu fiican eena ka dhibaatooyin yar, isla markaana uu sii wadi karo inuu taariikh ka sameeyo kooxda.”
Ronaldo ayaa waayihiisa labaad ee kooxda Manchester United ku biloowday si xoogan, kaddib markii uu ciyaarta 3 kulan oo isugu jira tartamada Premier League iyo Champions League, wuxuuna dhaliyay 4 gool.